Wagqugquzelwa ngumlimi angamazi - Ilanga News
Home Izindaba Wagqugquzelwa ngumlimi angamazi
Owesifazane waKwaNongoma osenepulazi, ufuya izinkomo zenyama, atshale nemifino
UNKZ Ayanda Zulu ephambi kwezinkomo zakhe ezingaphezulu kuka-200 azifuyile.
UKUBONA umlimi wesilisa ethenga imoto entsha ceke ngokheshi egalaji yikhona okokhela inhlasi yothando lokungena emkhakheni wezolimo kowesifazane osemncane waKwaNongoma osenamapulazi amabili njengoba efuye izinkomo zenyama aphinde atshale imifino kuwona ngokwahlukana.
UNkz Ayanda Nomvuselelo Zulu (27) kumanje ungumnikazi wamapulazi amabili abizwa ngeYenzokuhle Farm endaweni yaKwaNongoma naseDundee. Uthi wayesehlale isikhathi eside engasebenzi ngaphambi kokungena kwezolimo ngo-2016, okuyisinqumo athi akazisoli nakancane ngokusithatha.
Utshale amahektha awu-40 omhlaba epulazini lakhe lokuqala kanti kwelinye ubeke kulona izinkomo zohlobo lwenyama ezingaphezulu kuka-200.
Echaza ngokungena kwakhe kwezolimo, uthi wazijuba wayocela umhlaba emakhosini angakubo emuva kokuhlala isikhathi eside engasebenzi. Lokhu wakwenza emuva kokuba ehlabeke emxhwele, ebona umlimi wesilisa angamazi ethenga ngokheshi imoto kwelinye lamagalaji eNewcastle.
Uqale ukulima ngokutshala ubhontshisi
“Ngibe nenhlanhla yokuthi banginike indawo ebibiyiwe kodwa ingasetshenziswa, ngakho njalo ukushoda kwabantu abanothando lwezolimo. Ngesikhathi ngiwuthatha lomhlaba owu-40 wamahektha, ngitshale ubhontshisi kuwona. Ngasebenzisa u-R35 000 ukuwutshala ngoba kwakufanele ngiqashe ogandanganda abazolima nemishini yokutshala.
“Isivuno sami sokuqala sikabhontshisi sangenzela inzuzo ka-R30 000 sengizikhiphe zonke izindleko zokuwutshala nokuwuvuna. Lokhu kwangigqugquzela ukuba ngiqhubekele phambili.
“Esivunweni sesibili inzuzo engayithola ngathenga ngayo izinkomo ezimithi ngazifuya. Bezilokhu zizala bese ngiziyisa epulazini lomngani wami (ukuyokhwelwa) zibuye sezimithi, obekulokhu kuzandisa,” esho.
Uthi kumanje izinkomo uyazikhulisa bese ezithengisa endalini. Nokho uthi isifiso sakhe esikhulu wukuba nendawo yokuhlinza izinkomo. Uthi empeleni ubevele enalo uthando lwemfuyo esakhula, kwazise izinkomo bezikhona kubo yize ebengazitsheli ukuthi ngelinye ilanga uyogxila kulo mkhakha, aphile ngawo.
Iyinkinga enkulu eyokwebiwa kwemfuyo
Uthi ukuba ngumlimi kunazo izingqinamba zakho ikakhulukazi ezithinta ukwebiwa kwemfuyo.
“Abantu abaningi bayazi ukuthi ngingumfuyi wesifazane. Amasela ake asihlupha impela engena ayintshontshe. Lokhu kakuzange kungithene amandla kodwa kungifundise ukuba ngiqinise ezokuphepha,” esho.
Useqashe abantu abayisithupha abasebenza ngokugcwele emapulazini akhe, nababili abamsiza emfuyweni.
Uthi ukuvalwa kwezwe ngenxa yeCovid-19 kubashaye kakhulu bengabalimi abasafufusa, kwazise nezindali abathengisa kuzona izinkomo zike zavalwa, kwathi noma sezivulwa amanani ashaya phansi.
Emasimini uthi ukwandisile ukudla akutshalile njengoba esefake isipinashi, amathanga namazambane. Unxusa abesifazane abanothando lokulima ukuba bangahambeli kude, bangene kwezolimo ngoba amathuba avulelwe bona kakhulu. Uthi amapulazi amaningi uhulumeni uyawathenga awaqashise ngemali encane kubalimi.
Kakudingi izindodla zemali ukuba ngumlimi
“Kayikho le nto yokuthi uma ufuna ukutshala kumele ube nezindodla zemali. Uyakwazi ukuqasha ipulazi elikhulu ngo-R5000, bese imali uyikhokha emuva kokuthola isivuno. Abantu mabasukume bafune ulwazi. Ngisho ukuhlolelwa umhlabathi ukuthi ulungele ukudla okunjani usizwa mahhala ngabomnyango wezolimo.
“Okwenzayo wukuthatha inhlabathi uyihambise emnyangweni bakuhlolele yona, bese bekutshela ukuthi yiziphi izihlobo zokudla ezilungele umhlabathi wakho. Baphinde bakucebise ngokuthi yini edingeka kakhulu emakethe ongaqala ngayo ukuze usheshe ukwenza inzuzo. Into eyenza abantu bahlale emakhaya neziqu wubuvila nokungafuni ukufuna ulwazi,” esho.
Kuyabekezelwa, kawutshali namuhla uvune kusasa
Uthi emapulazini akhe kuyaye kufike nabafundi bezolimo bezobona ukuthi kusetshenzwa kanjani. Uphinde asize nodadewabo otshale amaklabishi abuye afuye nezinkukhu.
Uthi lonke ulwazi asenalo kwezolimo ulucoshe endleleni njengoba angena kulo mkhakha engakaze afunde lutho ngawo kodwa efakwa wuthando. Uthi ukulima kakumdingi umuntu ongakwazi ukubekezela kwazise impumelelo ithatha isikhathi eside ukuthi uyibone.
“Ngaphandle kothando nokubekezela kakulula neze ukungena kulo mkhakha. Abantu kumele bazi ukuthi kuyafukuzwa, kawutshali namhlanje besuvuna ngakusasa, kuthatha isikhathi usalindile,” ephetha.
Previous articleIsibhicongo kubhubha abawu-16 engozini
Next articleUsule isidumo uthisha ‘odlwengule’ umfundi